မော်ရင်ဟိုဟာ သူ့အပေါ် ဘယ်လောက်အထိ ကောင်းခဲ့လဲ ၊ ဘယ်လိုတွေ ဂရုစိုက်ပေးခဲ့လဲဆိုတာ ဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့ လင်ဂတ် - xyznews.co
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်တိုက််စစ် ကစားသမား ဖြစ်သူ ဂျက်စီ လင်ဂတ်က သူဟာ နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို နဲ့ ​ကောင်းမွန်လှတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို ဆိုတာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းကို 2016 – 2018 အကြား ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်တွေ မကောင်းခဲ့တဲ့နောက် ထွက်ခွာခဲ့ရပေမဲ့ 2017 ခုနှစ်တုန်းက အသင်းကို ကာရာဘောင် ဖလား ၊ ယူရို ပါလိဂ် ဖလားတွေ ဆွတ်ခူးပေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
အဆိုပါ အချိန်တုန်းကတော့ လင်ဂတ်ဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာအချို့ ရှိနေခဲ့ပေမဲ့ ပေါ်တူဂီသား နည်းပြ လက်အောက် အရေးကြီးတဲ့ ပွဲစဥ်တိုင်းနီးပါးမှာ ပွဲထွက် ကစားခွင့်တွေ ရရှိထားခဲ့ပါသေးတယ် ။ အခုတော့ နည်းပြဟောင်းဟာ သူ့ကို ဘယ်လို ဂရုစိုက်ခဲ့လဲဆိုတာ လင်ဂတ်က ထုတ်ဖော် ပြောပြ သွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
” ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်တော်နဲ့ ဟိုဆေးတို့ အကြားမှာ တကယ့်ကို ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောရပါ့မယ် ။ သူဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် တကယ်ပဲ ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေ အများကြီး ရရှိခဲ့ပေမဲ့ သူဟာ ကျွန်တော့်အပေါ် ယုံကြည်မှု ရှိခဲ့ပါတယ် “
” သူက ကျွန်တော့်ကို အရေးကြီးတဲ့ ပွဲစဥ်တွေမှာ ကစားခွင့်တွေ ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆုဖလားတွေ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ကြသလို သူဟာ ကျွန်တော့်ကို winner ဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ခင်ဗျားဆီကို အဲ့ဒီလို စိတ်ဓါတ်တွေ ထည့်သွင်းပေးနိုင်သူ တစ်ဦးပါပဲ “
” သူဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ ပါစင်နယ် ဆက်သွယ်ရတာမျိုးလည်း နှစ်ခြိုက်သူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ တခါတလေ ကျွန်တော် ဖုန်းကြည့်နေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ သူက Video calsl ခေါ်တာမျိုး လက်ခံ ရရှိခဲ့ဖူးပါသေးတယ် ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒီတိုင်း ဆက်သွယ်ရုံပါပဲ “
” အစတုန်းကတော့ ကျွန်တော်လည်း ထူးဆန်းတယ်လို့ ခံစားခဲ့ရပါသေးတယ် ။ သူကတော့ ဖုန်းခေါ်ပြီး ‘ ဟေး ဂျက်စီ ၊ ဘာတွေ လုပ်နေလဲကွ ? ‘ လို့ မေးရုံ ပါပဲ ။ ကျွနွတော်ကတော့ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ‘ ဒီတိုင်းပါပဲ ၊ TV ကြည့်နေတာပါ… ။ ခင်ဗျားရော ဘာလုပ်နေလဲ ‘ စသဖြင့် ပြန််ပြောခဲ့ပါတယ် “
” Hahaha တခါတလေတော့ ဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ပျော်စရာ ၊ ရယ်မောစရာ ပါပဲ ။ ပြီးတော့ မျှမျှတတ ပြောရရင် အဲ့တာက သူခင်ဗျားကို ဘယ်လောက်အထိ ဂရုစိုက်သလဲ ဆိုတာ ပြသခြင်း တစ်မျိုးပါပဲ ” လို့ ဂျက်စီ လင်ဂတ် က နည်းပြဟောင်းအကြောင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြသွားခဲ့လိုက် ပါတယ် ။
လင်ဂတ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ယူရို2020 ပြိုင်ပွဲတုန်းက အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းအတွက် ပါဝင် ကစားခွင့် မရရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ နိုင်ငံ့အသင်းအတွက် ကမ္ဘာ့ ဖလား ခြေစစ်ပွဲ ကစားဖို့ ပြန်လည် ရွေးချယ်ခံနေခဲ့ရပါပြီ ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လင်ဂတ်ဟာ နိုင်ငံ့အတွက် ကစားပေးပြီးနောက် မန်ချက်စတာကို ပြန်ရောက်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
Previous Article ပီဒရီ ရဲ့ စာချုပ်သစ် ၊ လီဗာပူးအတွက် သတင်းကောင်း ၊ ဂျိုရှုအာ နဲ့ ထိုးချင်တဲ့ ဝိုင်းဒါးလ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ချဲလ်ဆီး ဟာ အနာဂတ်မှာ အကယ်ဒမီထွက် ကြယ်ပွင့်ဟောင်း တဦးကို ကြေးကြီးပေး ပြန်ခေါ်မယ် ဆိုရင်တောင် သူ အံ့သြမိမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ဂလင်း ဂျွန်ဆင်